10 Inta badan Dhacdooyinka Special In Netherlands The | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 10 Inta badan Dhacdooyinka Special In Netherlands The
Waqtiga Akhriska: 7 daqiiqo(Last Updated On: 26/02/2021)
Haddii aad hadda uun u soo guurtay Netherlands ama ka fekereyso boodada on tareen si ay booqasho dhowr maalmood, aad u badan tahay ka yaabban wixii ka 10 Inta badan Dhacdooyinka Special In Netherlands The waa. ka raali noqon inaad ogaato waxaa jira waxyaabo badan si ay ku hanweynahay inaan, iyadoo aan loo eegayn waxa waqti ee sanadka aad soo booqato.
Iyo sidoo kale ciidaha pop Tacaddi, waxaa jira gaar ah dhacdooyinka gaarka ah ee Holland in aad ma ka heli doonaa meel kasta oo kale: dabaal la xiriira Boqortooyada Dutch, Falkenberg, iyo tulips. Dhacdooyinkaasi waxay yihiin oo dhan siyaabo fantastic si aad naftaada ku raaxaystaan ​​oo aad Hawiyaha ee jidka Dutch wax loo sameeyo!
Dhacdooyinka Special In Netherlands The 1: New Years Day quusin (Nieuwjaarsduik)
Tani waa mid ka mid ah kuwa dhacdooyinka gaarka ah ee Netherlands in uusan itaal darnaan ku jiraaba! Haddii aad rabto in aad bilowdo cusub sanadka, qaadan quusto qabow qaaday Maalinta New Years a (Maalinta Sannadka Cusub). Bandhigu wuxuu Dutch waxaa bilaabay kooxda dabaasha in a 1960. Waxaa jira 209 goobaha quusto Netherlands oo aad qaadi karto quusto a. Inkastoo, quusidda galay badda woqooyi ee Scheveningen, Hague, waa meesha ugu caansan ilaa 60,000 dadka. Waxaas dabadeed, dabaasha gariir waxaa lagu soo bandhigay la koob erwtensoep, maraq diiran xuub digir.
Dhacdooyinka Special In Netherlands The 2: Chinese sanadka cusub
Ma ogtahay in Netherlands ay leedahay mid ka mid ah beelaha ugu weyn ee Shiinaha ee Europe? Waxaan u maleynayaa in xaqiiqdii waa bar ah oo ku kacaya on our top 10 dhacdooyinka gaarka ah ee Netherlands ugu! Waxay inta badan ku nool yihiin Amsterdam, Rotterdam, iyo Hague, taas oo ay jirto kala duwan oo ka mid ah dhacdooyinka dabaal Sannadka Cusub ee Shiinaha ee. Amsterdam, madaxa si Dam Square iyo Nieuwmarkt / Zeedijk si aad u aragto maraan masduulaagii, qoob libaax, iyo rash. Waxa kale oo aad ka qeyb geli karaan hawlaha gaarka ah ee De Bijenkorf dukaanka waaxda, ay ka mid yihiin aqoon isweydaarsiyo aana, qaab music, iyo xafladaha shaaha, ama in ka macbudka Buddhist Fo Guang Shan wuxuu Hua.
maalintii ayaa sidoo kale wuxuu ku saabsan yahay cunto, iyo in Amsterdam, waxa aad cuni kartaa cunto dhadhan fiican suuqyada waddooyinka, at Palace badda (Europes horeysay sabayn makhaayad Chinese), ama mid ka mid ah dad badan oo ku maqaayado Chinese weheliyaan Stormsteeg iyo Geldersekade. In Hague, waxaad ka heli doontaa ciidaha Chinese ee Atrium ee hall magaalada iyo Den Haags Chinatown agagaarka Wagenstraat. Waxaad ka heli kartaa dhacdooyinka Rotterdam keentay ilaa Sannadka Cusub ee Shiinaha, kaalinta off by maalin dabaal agagaarka Chinese wijkpark Old West iyo Westkruiskade Chinatown. Haddii aad tahay khuraafaad ah, on Chinese New Year ee Eve cuni salad a kalluunka cayriin (yu Sheng) in la keeno nasiib wacan ama ka reebmaan, hai, nooc ka mid ah inta hirku, waayo, barwaaqo. Abaalmarinta Xi Fa cái! (Happy New Year!)
Bremen in ay Tareenadu Amsterdam
Hannover in Tareenadu Amsterdam
Bielefeld in Tareenadu Amsterdam
Dhacdooyinka Special In Netherlands The 3: Keukenhof (March Si May)
The Keukenhof ayaa muran la'aan waa beerta caanka ah ee Holland. Fiirsadaan ka baqeen at malaayiin multi midab leh tulips ubaxu in this park Dutch qurux badan ka soo daahay March ilaa bartamaha bisha May. Keukenhof The, taas oo macnaheedu yahay beerta jikada, ayaa illaa qarnigii 15aad iyo daboolida shir sanadeedkii a 32 hektar. Maalmahan, Keukenhof ku soo dhaweeyay 800.000 Kooxda martida ah sannad kasta.
Mid ka mid ah waxyaabaha muuqda ee ay 2018 theme ahaa ubaxa mahrajaan nalka toosaa, daboolaya aag of 250m2 oo kooban 50.000 tulips, Rinkeby oo Cinab, iyo crocuses. Waa maxay qoraalka xiga wuxu doono?
Essen in Tareenadu Amsterdam
Dusseldorf in Tareenadu Amsterdam
4: Restaurant Week Qaranka
Haddii Dhacdooyinka Gaarka ah ee Nederland ka mid ah cunto bilaash ah, idinna aad igu jirtaan tirin karaa! at 50% off, waxaa ficil ahaan waa wax xadin! Booqo Dutch this iidda, waayo, foodies, halkaas oo aad ka cuno kartaa in qaar ka mid ah maqaayadaha ugu sareeya ee Netherlands ee dhimis waalan.
Boqolaal makhaayadaha ka qayb badan magaalooyinka Dutch bixiyaan si la yaab leh saddex Dabcan casho menu for heerka gaarka ah ee 28,50 euros. Michelinguiden ka dhex muuqday maqaayado lacag dheeraad ah, iyo maqaayado ku qoran sare ee 250 Waxa kale oo u baahan xoogaa dheeraad ah. Haddii aad tahay foodie leh miisaaniyad kooban ama si fudud u cajiib ah si ay isugu dayaan soo baxay qaar ka mid ah fursadaha cuntada ganaax kala duwan oo aan gelinaya aad u badan oo ah god boorsada jeebka, ka dibna aad u jeclaan doonaa Restaurant Week. Tani dalab gaar ah qaadataa meel laba jeer sannadkii Nederland.
Si ay u fududaato inay jartaan miis, qabanqaabiyeyaasha dhacdada ka dhigay liiska 500 maqaayado ka qayb, per magaalada, ku saabsan Restaurant Week website.
Aachen in Tareenadu Amsterdam
Koblenz in Tareenadu Amsterdam
Frankfurt inay Tareenadu Amsterdam
5: Maalinta Kings (April 27)
Mid ka mid ah dhacdooyinka gaarka ah ee Netherlands ugu, haddii aan mid ka mid ah kuwa ugu xiiso leh iyo fowdo, waa On Maalinta Kings, waredid waa King Willem Alexander ’ dhalasho. magaalooyinka Dutch marti dhinacyada waddooyinka, suuqyada tagfi, iyo hawlaha, jeestay oo dhan Netherlands galay xafladda ugu weyn ee sannadka. Waxaad xaqiiqo ku dari kartaa this mid ka mid ah ugu dhacdooyinka gaarka ah ee Holland! Dadka soo baxay madaxa si ay ugu dabaal, ciyaaro music, labistaan ​​ilaa in orange oo ay ku wareegsan oo dhan-wanaag ah, haddii aan qasan, waqtiga. Kings Night la xusaa Habeenka Maalinta Kings hor, oo leh xaflado duurjoog ah xarumaha magaalada soo jiidanaya dad badan oo ka yimid maayl ku wareegsan.
Osnabruck in Tareenadu Amsterdam
Lubeck in Tareenadu Amsterdam
Bremerhaven in Tareenadu Amsterdam
Kiel si ay Tareenadu Amsterdam
Dhacdooyinka Special In Netherlands The 6: ubax
Weligaa maku aragtay sabayn dhererkeedu yahay sagaal mitir, daboolay ubax iyo majiire iyo wadooyinka, ku shaqeeya by ahayn ma aha shaqaale? Well, ku saabsan in aad tahay! ubax Zundert waxaa parade ugu weyn ee ubaxa ee dunida oo gebi ahaanba dhigay by mutadawiciin. Sannad kasta Hamlet kasta isku dayo in la dhiso birtiina ugu quruxda badan waxa uu abid dhisay. Booqo this dhacdo aad u gaarka ah ee Zundert sida aad Lebahood. Corso Zundert oo dhan wuxuu ku saabsan yahay markuu arkay oo, ee in, Mu'minaadka ah!
Kassel in Tareenadu Amsterdam
Mannheim in Tareenadu Amsterdam
Fulda in Tareenadu Amsterdam
Heidelberg in Tareenadu Amsterdam
Dhacdooyinka Special In Netherlands The 7: Relief ee Leiden (Relief Of Leiden)
The 10 dhacdooyinka gaarka ah ee Netherlands ugu baahan tahay in aad ka mid ah dhaqan, Dabcan. Munaasabadan ayaa waxaa ka mid ah Leiden waa mid ka mid ah! Waxay xusaysaa hareeraynta Isbaanish iyo gargaarka xiga ee magaalada in 1574. Leiden noqdo mid iidda weyn muddo laba maalmood ah oo isku xigta. Ku raaxayso dabaaldega, cadaalad xiiso leh, suuqa, riwaayada, xisbiyada, rashka, iyo suxuunta dhaqanka.
In kasta oo madadaalo iyo xaflado tiro badani jiraan, Leidens Ontzet waa xaflad la dhaqan badan oo leh macnaha taariikhiga ah. Subaxdii saddex October bilaabataa reveille ee hall magaalada. cunna Free iyo rootiga cad ka dibna siiyey ee Leiden Waag. markaas aad ku raaxaysan kartaa isugu muusikada ee Van Der Werf park iyo adeeg ee Pieterskerk ah. In dadka fiidkii dhaqan cuno fuud karooto iyo basal la yiraahdo Hutspot. xaflado ay joojin la buleer show grand.
Trier in Tareenadu Amsterdam
Ghent in Tareenadu Amsterdam
Dhacdooyinka Special In Netherlands The 8: dhoofnay Amsterdam
Doontu ku dhaqan bilaabo la Parade: boqolaal markab ayaa ku shiraacanaya IJ waxayna sameysanayaan aragti u gaar ah oo aadan waligaa iloobi doonin. In ka maalmood ee soo socda, kulan dhowr meel biyo ka qaaddid oo ah, lugu daro Skutsjesilen(aadeen markabka caadiga ah Faarisi). Netherlands Navy Royal ayaa sidoo kale soo bandhigi doonaa xirfadaha ay biyaha ku dul.
biyaha on Next in hawl oo dhan, sidoo kale waxaa jira wax badan oo ay qaban on wharves ah, taas oo ka dhigaysa waxaa si gaar ah. Barnaamijka shiraaqiina faanaa madadaalada, tahay, dhaqanka, music, iyo ciyaaraha iyo carruurta hawlaha.
Dhoofnay Amsterdam damaanad raxan cajiib ah oo daran, oo doonniyihiina dheer, farsamada dhaxal ahaan u dhoofaysa, maraakiibta casri ah, maraakiibta ciidamada badda, iyo replicas.
Liege in Tareenadu Amsterdam
Leuven in Tareenadu Amsterdam
Bruges in Tareenadu Amsterdam
Oostende in Tareenadu Amsterdam
Dhacdooyinka Special In Netherlands The 9: Tenting Days
campsites Gaarka ah, kaambada la awoodi karo, iyo teendhaysiga duurka waa u suurtoobaan Nederland inta lagu guda jiro Maalmaha Tenting ah (From teendhadaada). Ururka Maalmaha Tenting u shaqeeyaa dad wadaagaan. kuwaas oo; Goobaha kaambada, Society for Ilaalinta taxadiri Dabiiciga ah ee Holland, iyo sidoo kale Guddiga Dhirta ah. Waxaa lagu siinayaa fursad ay ku xerada ee xiiso leh ugu, cheap, iyo meelaha duurjoogta ah ee Noordoostpolder. Waxa kale oo xiiso leh super ee dadka waaweyn iyo caruurta si isku mid ah!
Genk si ay Tareenadu Amsterdam
Hasselt in Tareenadu Amsterdam
Namur in Tareenadu Amsterdam
Kortrijk in Tareenadu Amsterdam
Dhacdooyinka Special In Netherlands The 10: Parkpop
Parkpop waa mid ka mid ah dhacdooyinka pop ugu weyn ee Holland, qabtay sannad walba on Sunday ee la soo dhaafay ee June. Maxaa ka dhigay waxa ay si gaar ah, waa in ay tahay gebi ahaanba bilaash ah!
dhacdo A joogto ah tan iyo markii ay 1981, this iid pop qaranka ayaa Hague The on map-ka. Thanks to ciidaha music free on qiyaasta weyn. Sanado badan, waxa ay ahayd xitaa xafladda ugu weyn pop free music oo dhan of Europe! Waxaad filan kartaa in ka badan 350.000 dadka iidan laga cabsado.
Haddii aad ka timid qayb kale oo Hague, waa fikrad aad u fiican in wareegga goobta at Zuiderpark.
Waxaan u magacaabay 10 dhacdooyinka gaarka ah ee Netherlands ugu, laakiin waxaa jira kuwo kale oo xad-dhaaf ah. Hel on tareen iyadoo la kaashanayo Save A tareenka oo arag naftaada!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “10 Inta badan Dhacdooyinka Special In Netherlands The” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fspecial-events-netherlands%2F%3Flang%3Dso- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)